Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xukunno ku riday askar – Radio Muqdisho
Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xukunno ku riday askar
Maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukunno kuriday askar lagu soo eedeeyay in ay jidgooyooyin dhigteen iyo gacan ku dhiigle horay racfaan uga qaatay xukun Maxkamadeed oo lagu riday.
Maxkamadda oo u fadhiisatay dacwad ciqaabeed loo haystay ilaa iyo 7-ruux oo lix ka mid ah loo haystay inay dhigteen jidgooye jidka aada dhanka Deegaanka Jaziira iyo askari suuqa bakaaraha ku dilay ruux shacab ah.
Gaashaanle Dhexe Xasan Cismaan Axmed ayaa ku dhawaaqay xukunka Maxkamadda ay maanta ku riday eedeysanayaasha la horgeeyay.
“Maxkamadda waxaa u cadaatay Dable Bool Cabdullaahi Jiinoow Maxamed in uu 9-6-2014 gudaha suuqa bakaaraha ku dilay marxuum la oran jiray Maxamed Sandhoole Xasan, Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay baabi’isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ay horey ugu xukuntay dable Bool Cabdullaahi Jiinoow Maxamed, waxayna dambiilaha ku xukuntay in uu bixiyo boqol halaad oo geel ah oo ah diyadii Marxuumka uu dilay iyo labo sano oo xukun tacsiir ah oo ay uga bilaabaneyso 25/6/2014-ka” ayuu yiri Gaashaanle dhexe Xasan Cismaan.
Gaashaanle Dhexe Xasan Cismaan Axmed ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xukunka kale ee lagu riday lix qof ee jidgooyooyin dhigtay Deegaanka Jaziira, isla markaana sameystay boonooyin been abuur ah oo ay gaadiidka lacago baad ah uga qaadi jireen, kuwaaasi oo afar ka mid ah lagu xakumay min 20 sano oo xabsi ciidan ah, waxaana ay kala yihiin .
Dable bool Abshir Xasan Caddow “Abshir yare”, Alifle Bool, 18,887 Cumar Maxamed Aadan, 3. Dable xoogga Cali Maxamuud Caddow iyo 4 Abshir Xasan Caddow, halka Maxamed Cismaan Abiikar iyo Dable xoogga Faarax Muuse Xasan Maxamed ay maxkamadda sare ku xakuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah.
Dar dargelinta arrimaha xaquuqda aadanaha Soomaaliya oo laga hadlay